EPONT Double Ram Hydraulic Jack Bottle Jack ee Isticmaalka Baabuurka
1.Shirkaddu waxay ku qalabaysan tahay CNC lathe, mashiinka wax lagu shiidayo, mashiinka wax lagu shiidi karo, imtixaanka culeyska joogtada ah, mashiinka tijaabada culeyska firfircoon, tijaabiyaha Rockwell hardness tester, alxanka robot-ka YASKAWA, farsamaynta feerka iyo qalabka tijaabinta, si loogu ogolaado shirkadda tayada tayada iyo ilaalinta lagu kalsoonaan karo. godadka qaybaha muhiimka ah ee shirkadda - jack cylinder, gaar ahaan helitaanka mashiinka qodista laysarka si loo hubiyo saxnaanta achining ee meelaynta, godka xadka, si tayada wax soo saarku ay u ahayd boodbood tayo leh.
Shirkaddu waxay ku qalabaysan tahay weelka CNC, mashiinka wax lagu shiidayo, mishiinka shiida, tijaabada culeyska joogtada ah, mashiinka tijaabada culeyska firfircoon, tijaabiyaha qallafsanaanta Rockwell, alxanka robot-ka YASKAWA, feeraynta qalabka iyo qalabka tijaabada, si loogu ogolaado shirkadda tayada wax soo saarka iyo ilaalinta la isku halayn karo. qaybaha muhiimka ah ee shirkadda - jack cylinderen, gaar ahaan helitaanka mashiinka qodista laysarka si loo hubiyo saxnaanta achining ee meelaynta, dalool xadka, si tayada wax soo saarka ayaa ah boodada tayada.
Waxaan leenahay khadadka wax soo saarka 4 iyo 2 khadadka wax soo saarka daaweynta kulaylka, Jack dhalada hal maalin laga yaabaa in aan soo saaro oo ku saabsan 5000pcs, oo ku saabsan jaakadda sagxada laga yaabaa in aan soo saaro 500pcs.
Alaabadayada waxaa inta badan loo dhoofiyaa in ka badan 30 dal sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo etc.Our macaamiisheena waxaa ka mid ah macaamiisha OEM badan oo ku takhasusay tareenka, baabuurta, fargeeto iyo mishiinada dhismaha, waxaan waxay horeba ula lahayd iskaashi in ka badan 10 ka mid ah 500 ee shirkadood ee ugu sarreeya adduunka iyagoo ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu waaweyn ee Shiinaha.